Ukunakekelwa Kwabesilisa Ebusweni - Izeluleko Ngamadoda AseSitayeleni | Amadoda aSitayela
Ukunakekelwa kobuso kwabesilisa
U-Alicia tomero | | Kugundiwe, Izimonyo, Ukunakekelwa komuntu siqu
Amadoda vele ngokuya ugcizelela ukunakekela isikhumba sakho. Ukwenza ukunakekelwa kobuso emadodeni kuzama ukuthuthukisa ukubukeka kwabo, ukukhombisa isikhumba sabo ngobuhle nangaphezulu suziqonde kangcono. Namuhla sinemakethe inani elikhulu lale mikhiqizo yabesilisa nazo zonke izinhlobo zesikhumba.
Ukunakekelwa kobuso emadodeni kudinga inqubo efanayo nesiyalo njenganoma yikuphi ukwelashwa. Akufanele ukufaka noma yimuphi ukhilimu esiwubona ekuqaleni futhi ungaphansi kowesifazane, ngoba isikhumba sendoda sihluke ngokuphelele ngezici ezahlukahlukene esizobona ngezansi.
1 Ukunakekelwa kobuso emadodeni kufanele kube kanjani?
2 Inqubo yansuku zonke
3 Izindlela zokwelapha zemvelo
4 Ukunakekelwa okwengeziwe nezeluleko zesikhumba sakho
Ukunakekelwa kobuso emadodeni kufanele kube kanjani?
Kubalulekile ukuqaphela lokho Isikhumba samadoda sikhulu kakhulu kunesabesifazane, ngaphandle kokuba sethubeni lokuqukatha izindlala ezinamafutha futhi ziphindaphindwe kakhulu ukuhlushwa induna. Kungenxa yalokho badinga ukunakekelwa okukhethekile ngoba ngemuva kokushefa ngoba zizodalula isikhumba sakho ngaphandle.
Inqubo yansuku zonke
Hlanza ubuso nsuku zonke. Kubalulekile ukulandela umkhuba wenhlanzeko yansuku zonke ngoba isikhumba sabesilisa siqukethe izindlala ezibusisa kakhulu, ngakho-ke kubalulekile hlanza konke lokho kunqwabelene nokugcwala nothuli usuku lonke. Ijeli yokuhlanza kufanele isetshenziswe njalo ekuseni nangaphambi kokulala.
Khipha isikhumba: Njengenqubo yokuhlanza kubaluleke kakhulu khipha isikhumba okungenani kabili ngesonto. Lolu hlobo lukakhilimu lubizwa ngokuthi yi-exfoliating futhi ngokuthungwa kwalo okusamanzi basiza kulo susa ngokuphelele wonke amangqamuzana esikhumba afile.
Nakekela ukushefa kwakho. Kufana nokuthunga nokucula, kodwa ngemuva kwakho konke lokhu sinesikhumba esihluphekayo lapho sisishefa. Ukwenza inqubo ibe lula kulula ukukwenza ngemuva kokugeza, ngoba izinwele zizothamba kakhulu futhi kuzoba lula kakhulu ukuzisika. Sebenzisa igwebu lokushefa noma ijeli elifanele uhlobo lwesikhumba sakho futhi uhlole ukuthi izinsingo zisesimweni esihle yini.
Sebenzisa i-After Shave. Kufanele uphinde uthole ukuzola kwesikhumba ngemuva kokushefa. Hlanza zonke izinsalela ebezikhona wejeli noma igwebu futhi uma kungenzeka ngamanzi abandayo, khona-ke ngethawula elomile. Faka isicelo se-After Shave kuyo yonke indawo eshefiwe kanye nokunyakaza okuyindilinga, le lotion izosiza ukudambisa ukucasuka okungenzeka futhi ibulale amagciwane ukusikeka okuncane okukhiqizwayo.
Kususa isikhumba. Kubaluleke kakhulu thambisa isikhumba sobuso ngokhilimu, njengoba ukushefa ngemuva kungahambisi ngokwanele. Okwakho funa ukhilimu ngokuya ngohlobo lwesikhumba sakho. Njengomthetho ojwayelekile, amadoda anesikhumba esinamafutha amaningi, ngakho-ke sidinga ukhilimu ongenamafutha ukuze singagcwalisi izimbotshana.
Sebenzisa umugqa wamehlo. Ungakhohlwa lesi sinyathelo njengoba silungele i- ngcono kakhulu imibimbi ezungeze amehlo akho futhi wenze bushelelezi imibimbi yakho.
Amafutha asebusuku noma i-serum. Ukulandela le nqubo nokuyisebenzisa ngaphambi kokulala kulungele amadoda angaphezu kweminyaka engama-40. Uzoyibona imiphumela yayo emasontweni ambalwa, kusukela lezi zinhlobo zonokhilimu zisebenza kahle kakhulu ebusuku.
Amaski wemvelo phakathi nesonto. Lolu hlobo lwemaski lungumnikelo owengeziwe wokunakekela kangcono isikhumba sobuso. Uma uthanda ukuzinakekela ungenza imaski yakho, ngalokhu siphakamisa kule ndatshana indlela yokwenza okuhle kakhulu ngezithako zemvelo.
Ukunakekelwa kwentshebe. Ukunakekelwa kobuso kuyafana, singakhipha amafutha ngendlela efanayo futhi sondle isikhumba sethu ngendlela efanayo. Kukhona emakethe yokunakekelwa kwentshebe imikhiqizo ethile yokuyihlanza nokufaka uwoyela ukuze unwele izinwele zakho ngakho-ke lizoba lihle futhi likhazimule.
Izindlela zokwelapha zemvelo
Kulabo bantu abangathandi ukusebenzisa okhilimu emakethe, singazenzela izindlela zokwelapha ukunakekela isikhumba sethu. Ukuhlanza nsuku zonke silokhu senza ukuwasha okufanayo, omunye ekuseni nomunye ebusuku. Ungakwazi engeza ingxenye kalamula noma ubisi olusha emanzini.
Ukukhipha isikhumba unga sebenzisa izinto zokuhlanza indlu. Sizohlanganisa isipuni se-oats, nesipuni samanzi nenye kasawoti ocolekile. Uhlikihla ubuso bakho ngokucophelela kuwo wonke amakhona, vumela uphumule imizuzu embalwa bese ugeza ngamanzi abandayo.
Ukuyithambisa singakwazi sebenzisa buso bemvelo Njengoba kushiwo ngaphambili, ukusetshenziswa koju nama-alimondi kuyisethi enhle. Ukuthambisa isikhumba ngemuva kosuku olumatasa singakwazi faka inkungu ebusweni nge-infusions njenge chamomile netiye eliluhlaza. Bazoshiya isikhumba sakho sikhululeke ngokuphelele.
Ukunakekelwa okwengeziwe nezeluleko zesikhumba sakho
Imikhiqizo esekwe ku-Retinol zinhle kakhulu ukukwazi ukuba nesikhumba esihle kakhulu, okungenani yilokho okunconywa ngochwepheshe. Isiza ukunciphisa imibimbi, amabala nezinduna.
Esinye isincomo ukuzama sebenzisa i-sunscreen, ukunakekelwa okungcono kakhulu kwesikhumba sakho. Singakwazi nokwenza umbiko we-exra hydration ukuphuza inani elikhulu lamanzi nsuku zonke. Akunconyiwe sebenzisa i-caffeine, ugwayi, ushukela notshwala, izithako ezingakhiqizi zokugcina ithoni yesikhumba ekahle.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ukunakekelwa kobuso kwabesilisa
Ukuvalelwa njengombhangqwana: ungayinqoba kanjani